TodoDLS - vondrom-piarahamonina Dream League Soccer tianao indrindra
💵 Vola madinika
️ DLS Ho an'ny PC
Tongasoa eto TodoDLS! Pejy tena ilaina ho an'ny mpilalao rehetra Soccer League Soccer (DLS). Ary koa, na inona na inona dikan-teninao DLS ankafizinao: 2020, 2019... Eto ianao dia hahita fomba hahazoana vola madinika, torolalana hanatsarana ny lalao, fanamiana ary... maro hafa! Eto ambany ianao dia manana ny zava-dehibe indrindra, fa tohizo ny famakiana, satria aorian'izany dia misy mpitari-dalana tena mahaliana raha tianao! mandresy ny lalaonao rehetra!
Ahoana ny filalaovana Dream League Soccer amin'ny PC
Fanamiana (Kits) ho an'ny Dream League Soccer
Mahazoa vola madinika amin'ny Dream League Soccer
Cheats ho an'ny Dream League Soccer: Ahoana no hahatongavana ho mpilalao tsara kokoa
Ahoana ny famongorana ny Lag amin'ny Dream League Soccer
Ahoana ny fomba hahazoana diamondra maimaim-poana amin'ny DLS
Manana be dia be izahay fanamiana feno, miaraka amin'ny kitapo an-trano sy ivelan'ny trano, ary koa ny logo sy ampinga. Afaka mahita vitsivitsy eto ambany ianao. tsindrio eto mba hahitana ny fanamiana rehetra ananantsika misy.
Fanamiana (Kits) sy Logo Arsenal
Fanamiana (Kits) sy Logo de Atlético de Madrid
Fanamiana (Kits) sy Logo ny Chelsea
Fanamiana (Kits) sy Logo Leicester City
Fanamiana (Kits) sy Logo Liverpool
Fanamiana (Kits) sy Logo Manchester City
Fanamiana (Kits) sy Logo de Manchester United
Fanamiana (Kits) sy Logo de Real Madrid
JEREO ny fanamiana rehetra
Inona no atao hoe Dream League Soccer?
Raha misy namanao nanasa anao ho amin'ity pejy ity ka tsy fantatrao tsara ny momba ny Dream League Soccer dia hiezaka hanazava aminao haingana izahay.
Soccer League Soccer dia saga amin'ny lalao video ho an'ny finday (Android, iPhone ary na Windows Phone aza) novolavolain'ny studio anglisy iray, miorina any Oxford (Angletera), fantatra amin'ny anarana hoe Lalao Fikasihana Voalohany. Ny dikan-teny farany amin'ny saga dia DLS 2020, izay misy fiovana maro amin'ny fomba lalao sy ny fomba fandrosoana ao.
DLS 2020 no dikan-teny farany amin'ny saga
Nahatratra 10 tapitrisa mahery ny fampidinana ity lalao ity tao amin'ny fivarotana lalao. Google Play ary mpilalao baolina kitra malaza toa azy Gareth Bale, an'ny ekipa baolina kitra Espaniola Real Madrid sy Luis Suarez, FC Barcelona.
Avy amin'ny kinova DLS 2016, nampiditra ny lalao ny FIF Pro licence afaka milalao miaraka amin'ireo mpilalao baolina kitra tena izy ary fomba Multiplayer hiatrehana ireo mpankafy baolina kitra hafa.
Raha tianao ity pejy ity ary te hahalala ny vaovao farany dia azonao atao ny manaraka anay amin'ny Facebook na Twitter. Ary raha manana fisalasalana ianao na misy fanontaniana dia azonao atao ny mampiasa ny endrika fifandraisana eo amin'ny farany havanana na mandehana any amin'ny faritra fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra rehetra. Misaotra betsaka amin'ny fitsidihana TodoDLS!
TodoDLS no loharanom-baovao tsara indrindra ho an'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny lalao video finday, Dream League Soccer. Torolalana, toro-hevitra ary vaovao farany eto!